Kitra atsy Afrika Atsimo: nanome rariny an’i Dax ny Fifa | NewsMada
Kitra atsy Afrika Atsimo: nanome rariny an’i Dax ny Fifa
Namoaka lahatsoratra tao amin’ny tambajotra seraserany, omaly, ny klioba Kaizer Chiefs, Afrika Atsimo, mahakasika ny raharahan’Andriamirado Andrianarimanana Arohasina (Dax). Nambarany tamin’izany fa nanome rariny ity klioba afrikanina tatsimo ity ny komisiona misahana ny mpilalao, eo anivon’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa).
Notapahina fa omena alalana ny federasiona baolina kitra ao Afrika Atsimo (Safa), hanoratra vonjimaika ny anaran’i Dax ao anaty lisitry ny mpilalaon’ny Kaizer Chiefs, izay mandray anjara amin’ny fifaninanana ao aminy izy ireo. Tanterahina avy hatrany izany fanapahan-kevirtra izany.
Tsiahivina fa anisan’ny nahataraiky izany fanoratana ny anaran’i Dax izany ny fitoriana napetraky ny Fosa Jr. «Faly izahay fa nahazo rariny ary voavaha ihany ny olana teo amin’i Dax. Afaka mifantoka tsara ao anatin’ny baolina kitra amin’izay izany izy», hoy i Bobby Motaung, tomponandraikitra ao amin’ny Kaizer Chiefs. Tsiahivina fa 27 taona i Dax, amin’izao fotoana izao. Tsy mbola fantatra kosa ny ho faharetan’ny fifanarahana sy ny karaman’i Dax, ao amin’ity klioba ity.